တောင်အာဖရိကအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
တောင်အာဖရိကမှာလောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 1994 ကတည်းကခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လောင်းကစားဝိုင်းအားလုံးသည်ပုံစံများကိုအွန်လိုင်းကဏ္ဍ မှလွဲ. တရားဝင်နေကြသည်။ မြင်းပြိုင်ပွဲအပေါ်လောင်းကစားနှင့်လောင်းကစားသာလျှင်အားကစားအွန်လိုင်းခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ထက်ပိုမို 40 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတောင်အာဖရိကမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အများဆုံးလောင်းကစားရုံဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်, Gauteng ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအတူတူ4slot ကစက်တွေနဲ့ဗီဒီယိုဖဲချပ်ထက်ပိုပြီး, ကဒ်ဂိမ်း 180 စားပွဲထက်ပိုမဆံ့ထားတဲ့ 5,200 ကြီးမားကာစီနိုလောင်းကစားရုံရှိပါတယ်။
အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံ GrandWest ကာစီနို & Entertainment ကကမ္ဘာ့ဖလားကိပ်တောင်း၌တည်ရှိ၏။ ဂိမ်းအဘို့အ 79 စားပွဲ, 10 ဖဲချပ်စားပွဲ, 2500 slot ကစက်တွေနဲ့ဗီဒီယိုဖဲချပ်ထက်ပိုပြီးရှိပါတယ်။
Sun ကနိုင်ငံတကာ - 13 လိုင်စင်;
Peermont ကို Global - 8 လိုင်စင်;
လန်ဒန်ဒုတ်အင်တာနေရှင်နယ် - 1 လိုင်စင်;
တောင်အာဖရိကမှာလောင်းကစားကနေဝင်ငွေအကြမ်းဖျင်းတူညီရှိနေဆဲနှင့်တောင်အာဖရိကကျပန်းဘီလီယံပေါင်းများစွာအတွက်တိုင်းတာလျက်ရှိသည်။ ဥပဒေရေးရာလောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 2015-2016 စုစုပေါင်းဝင်ငွေအဘို့အ Zar 26.3 ဘီလီယံအထိသို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.86 ဘီလီယံပမာဏ။ အကြီးဆုံးဝင်ငွေဟာလောင်းကစားရုံများယူဆောင်ဖြစ်ပါတယ် - စုစုပေါင်းဝင်ငွေ 70.5% ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အဆိုပါကစားသမားအများစုသည်အမျိုးသားရေးထီအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ - 78.9% ။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံတွင်သာ 10.6% ကစား။ လူဦးရေရဲ့လေးပုံသုံးပုံအစဉ်အဆက်မဆိုလောင်းကစားအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူကြပြီ။ ပိုများသောနေထိုင်သူများ၏ထက်ဝက်ထက်လောင်းကစားရုံသို့မဟုတ်လောင်းကစားအပန်းဖြေစည်းရုံးရေး၏အတော်လေးခံထိုက်လမ်းစဉ်းစားပါ။
တောင်အာဖရိကတောင်အာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအာဖရိကမှာနေတဲ့ပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတိုက်ကြီးအတွက်အများဆုံးဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်နှင့် G20 အတွက်တစ်ခုတည်းသောအာဖရိကပြည်နယ် (ထို "Big နှစ်ဆယ့်") သည်။
တိုင်းပြည်ကအဖြူအာရှနှင့်အနက်ရောင်ကလူအများကြီးရှိပါတယ်, 11 ပြည်နယ်ဘာသာစကားများအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ 1652 အတွက်ဒတ်ခ်ျကိုလိုနီမှပထမဦးဆုံး။ တောင်အာဖရိကကြွယ်ဝအတိတ်ရှိပါတယ် - ထို 19th ရာစုအတွင်း -Anglo-Boer စစ်ပွဲတွေဟာ 20th ရာစု၌ရှည်လျားသောအသားအရောင်ခွဲခြားရှိ၏စိန်နှင့်ရွှေအဘို့စစ် တိုက်. ခဲ့ကြသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစီးပွားရေး, စီးပွားရေး, နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေအနေတခုတခုအပေါ်မှာ Imprint ထားခဲ့တယ်။
တိုင်းပြည်အဓိကအားဖြင့်စိန်, ရွှေ, ပလက်တီနမ်, စက်ပစ္စည်းနှင့်ကိရိယာများတင်ပို့ပါတယ်။ သွင်းကုန် - ရေနံနှင့်ထုတ်ကုန်။ တောင်အာဖရိကကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်အဆင်ပြေသည်အဘယ်မှာရှိနိုင်ငံပေါင်းများ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက် 39th အဆင့်။
တောင်အာဖရိကရှိလောင်းကစားဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 1994 သည်အထိပိတ်ပင်ထားခံခဲ့ရသည်။ ပညတ္တိကျမ်း, 1965 အတွက်မွေးစားခြင်း, တောင်အာဖရိကရဲ့လောင်းကစားအက်ဥပဒေကိုခေါ်မြင်းပြိုင်ပွဲ မှလွဲ. , လောင်းကစားပုံစံအားလုံးကိုပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်သည်။ သူတို့ကတစ်ဦးအားကစားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
တရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှောင်းပိုင်း 1970s ကတည်းကဖွံ့ဖြိုးစပြုလာသည်။ သူတို့ဟာ bantustans Boputatsvan, Siskey, Transkei, Venda အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Bantustans - တောင်အာဖရိက၏သမိုင်းအတွက်အထူးဖြစ်ရပ်ဆန်း။ သူတို့ကအမေရိကန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှအတန်ငယ်ဆင်တူပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ဤသည်တောင်အာဖရိက၏ဌာနေအနက်ရောင်လူဦးရေများအတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည့်နယ်မြေသည်။ တချို့က bantustans လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့, ဤတစ်လောင်းကစားလုပ်ငန်းကိုစုစည်းဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဥပမာအားဖြင့်, Bophuthatswane တစ်မြို့-လောင်းကစားရုံ Sun ကစီးတီးကိုတည်လေ၏။
သာတိုင်းရင်းသားတောင်အာဖရိက bantustans တှငျနထေိုငျနိုငျသညျ, ဆုံးနဲ့နိုင်ငံသားတွေတရားဝင်သည်ဤအဖွဲ့အစည်းများမဝင်နိုင်ကြ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ 1995 နေဖြင့်တိုင်းပြည်အတွင်း 2000 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအကြောင်းကိုရှိခဲ့သည်။
1994 အတွက်အဆုံးသတ်အသားအရောင်ခွဲခြားရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီအစိုးရအာဏာရလာသည့်အခါလောင်းကစားပုံစံအားလုံးကိုပြေလည်ခဲ့ကြသည်။ 1996 အတွက်ထုတ်ပေးခဲ့သည့်အမျိုးသားလောင်းကစားအက်ဥပဒေ, တစ်ဦးလောင်းကစားရုံလိုင်စင်စနစ်နှင့်တစ်ပြည်နယ်ထီအတည်ပြုခဲ့သည်။ မြင်းပြိုင်ပွဲကိုထပ်လောင်းကစားဝိုင်းတစ်ပုံစံအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
ကစားသမားတောင်အာဖရိကများအတွက်အသက်အရွယ်ကန့်သတ် 18 နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်မရောက်သေးသူလောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုအတွက်ကစားရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
အမျိုးသားလောင်းကစားအက်ဥပဒေ 2004 - ယခင်ဦးတည်း complementing;
1996 အမျိုးသားလောင်းကစားအက်ဥပဒေရှင်းလင်းစွာလောင်းကစားရုံလိုင်စင်တိုင်းပြည်များ၏ပြည်နယ်များအကြားဖြန့်ဝေသင့်ပါတယ်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပါတယ်။ လိုင်စင်အရေအတွက်စုစုပေါင်း 40 အပိုင်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့ကဖြန့်ဝေနေကြသည်:
အနောက်တိုင်းကိပ်ပြည်နယ်ရှိ (အလယ် - ကိပ်တောင်း) -5လိုင်စင်;
မြောက်အမေရိက-ကိပ်ပြည်နယ်ရှိ (Kimberley) - 3;
အရှေ့-ကိပ်ပြည်နယ်ရှိ (Bisho) - 5;
အခမဲ့ပြည်နယ် (Bloemfontein) - 4;
မြောက်အမေရိကအဘိဓါန် Western ပြည်နယ် (Mafeking) -5လိုင်စင်;
Gauteng (ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်) - 6;
Limpopo သို့မဟုတ် Northern ပြည်နယ် (Polokwane) -3လိုင်စင်။
အမျိုးသားလောင်းကစားဘုတ်အဖွဲ့ - တောင်အာဖရိကမှာလောင်းကစားဝိုင်း၏ပြည်နယ်ထိန်းညှိ။ အဆိုပါစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအားပါဝင်သည်:
တောင်အာဖရိက၏ကာစီနိုအသင်း (CASA) - တောင်အာဖရိက၏လောင်းကစားဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအခြားကစားသမားရှိပါသည်။ အဆိုပါအသင်းအဖွဲ့ 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ Key ကိုတာဝန်များကို:
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကတိုင်းပြည်ရဲ့အားလုံးနီးပါးလောင်းကစားရုံမှီဝဲ။ အစိုးရကသူ့ဟာသူကိုယ်စားလှယ်များအမျိုးမျိုးသောမြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ၏ရှယ်ယာ 37% ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ အသင်းအဖွဲ့ဝင်များ 100,000 အလုပ်အကိုင်များထက်ပိုသည်။
ယခုတိုင်အောင်အပြီးသတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေရာ 2008 အမျိုးသားလောင်းကစားပြင်ဆင်ရေးအက်ဥပဒေ, တောင်အာဖရိကအတွက်အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းကိုအသိအမှတျပွုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းလောင်းကစား၏အဖှဲ့အစညျး, သူတို့ထဲမှာပါဝင်မှုအဖြစ်အညီအမျှတရားမဝင်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း - အွန်လိုင်းလောင်းကစားမအားလုံးအမျိုးအစားများကိုပိတ်ပင်ထားကြသည်။ အကြောင်းမူကား,
ပညတ္တိကျမ်းဒါခေါ် "အပြန်အလှန်ဂိမ်း" တားမြစ်ထား:
နှင့်အထွေထွေအတွင်း Bookmakers ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ သဘာဝကျကျသည်ဘီစီ၏စည်းရုံးရေးမှူးကအစိုးရအနေဖြင့်တစ်ဦးလိုင်စင်ကိုရှိသင့်သည်။
လောင်းကစားရုံ - ဘုတ်ဂိမ်းများနှင့် slot နှစ်ခု;
ဥပမာအားဖြင့်, ကိပ်တောင်းအတွက်အလွန်လူကြိုက်များဂိမ်း klawerjas (klawerjas) ဖြစ်ပါသည် - တံစိုးနှင့်အတူဟောင်းဒတျချြဂိမ်းကနယ်သာလန်ဆဲရေပန်းစားသည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်လာဘ်၏အကောင်းဆုံးနံပါတ်တစ်ခုစုဆောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဂိမ်း Kaluka (kalookie) - rummy တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်အချို့ပေါင်းစပ် dial ရန်ဖြစ်ပါသည်။
Thuni (Thuni သို့မဟုတ် Thunee) တောင်အာဖရိက၏ပုံမှန်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ဒါဟာအာရှသားနှင့်အတူရေပန်းစားသည်။ ဂိမ်းရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းအမှတ်တစ်ဦးအခြို့သောအရေအတွက်ကဂိုးသွင်းရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။
canasta (canasta) - rhammi တစ်မျိုးစိတ်;
Samba (Samba) - တူးမြောင်းတစ်မူကွဲ;
skat (skat) - ဂျာမဏီကနေလာဘ်တစ်ခုဂိမ်း;
ကြောင်နှင့်ကြွက် (ကြားမှနှင့်ငြိုး) - ယှဉ်ပြိုင်မှု tapeworm တစ်ပုံစံ;
shithead (shithead) - အားလုံးကတ်များ၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ဂိမ်း။
အကြီးဆုံးဝင်ငွေဟာလောင်းကစားရုံများယူဆောင်ဖြစ်ပါတယ် - 70.5 စုစုပေါင်းဝင်ငွေ% သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံခန့်;
; 16.9% သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 315 သန်း - သူတို့နောက်နှုန်းထားများရှိပါတယ်
ထို့နောက် LPM (Limited မှနိုင်ငွေစက်များ, ကန့်သတ်ငွေပေးချေမှုနှင့်အတူစက်) - 9.0% သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 167 သန်း;
3.6 စုစုပေါင်းဝင်ငွေ% သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 66 သန်း - စတုတ္ထနေရာအရပ်ဘင်ဂိုကစားပေါ်မှာ။
Gauteng ပြည်နယ်အတွင်းရှိလောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအများဆုံးရရှိ - 40% သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 745-2015 အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2016 သန်း;
တတိယနေရာအရပ် KwaZulu-Natal အားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ကို - 18.5% သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 344 သန်း။
Gauteng ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, အစုရှယ်ယာနှင့်ဘင်ဂိုကစားအတွက်အမြင့်မားဆုံးအသားတင်ဝင်ငွေထုတ်လုပ်သည်။ 30% - ထို LPM ကဏ္ဍတွင်အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေအနောက်တိုင်း-ကိပ်ပြည်နယ်ရှိအားဖြင့်လက်ခံရရှိသည်။
2015 အတွက်တောင်အာဖရိကရဲ့မြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအတွက် slot ကစက်တွေအရေအတွက် 23,415 ဖြစ်ခဲ့သည်။ slot နှစ်ခုကနေဝင်ငွေ - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 969 သန်း
တိုင်းပြည်အတွက်အားလုံးလောင်းကစားရုံများတွင် 2015 အတွက်စားပွဲအရေအတွက် 932 အပိုင်းပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ထံမှဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 237 သန်းဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ဘတ်ဂျက်မှအဆိုပါဖြတ်တောက်ကိုလည်းဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအတွက်ခန့်မှန်းနေကြသည်။ 2015 မှာတော့တောင်အာဖရိကအာဏာပိုင်များကလောင်းကစားဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနေ $ 262 သန်းရရှိခဲ့သည်။ ဤသည်လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှု၏စုစုပေါင်းဝင်ငွေ 28% တက်စေသည်။
လောင်းကစားဝိုင်းအခွန် - ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များအားဖြင့်လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူအနေဖြင့်စုဆောင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါတန်ဖိုးလိုင်စင်ရှိ၏အသားတင်ဝင်ငွေသည်နှင့်အညီတွက်ချက်လျက်ရှိ၏
တန်ဖိုးအားအခွန်ကဆက်ပြောသည် - ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလဲလှယ်၏တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်မှာထည့်သွင်းတန်ဖိုးကို၏အခြေခံပေါ်မှာတွက်ချက်သည်။ ဒါဟာအစလောင်းကစားရုံမှမဟုတ်ဘဲကစားသမားမှတရားစွဲဆိုထားသည်။
တောင်အာဖရိကတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားပိတ်ပင်ထားကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းအားလုံးကစားသမားသူတို့ကိုယ်သူတို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလောင်းကစားရုံ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲဖို့နိုင်ကြသည်။ ကစားသမားဝန်ဆောင်မှုရိုးရှင်းစွာအရာဒေသခံငွေကြေးစနစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်တဦးတည်းမသိမသာကွဲပြားအဲဒီမှာဖြစ်ပါသည်: အောက်တိုဘာလ 4, 2016 ထံမှအာဏာပိုင်များအွန်လိုင်းကစားသမားများ၏အနိုင်ရရှိတဲ့သိမ်းယူနိုင်။ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဦးစီးဌာနအမျိုးသားလောင်းကစားပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကြမ်းအသစ်ပြင်ဆင်ချက်ထုတ်ဝေခဲ့သည်, အရာသည်နှင့်အညီ, တရားရုံးကစားသမား '' အနိုင်ရရှိတဲ့သိမ်းယူနှင့်ထိန်းသိမ်းထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
တိုင်းပြည်အတွင်း၌ပင်အရောင်းအတားမြစ်ထားသောအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, သင်သည်သင်၏အအနိုင်ရရှိတဲ့ရနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသော်လည်းမ - ထို့ကြောင့်သင်အွန်လိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Gauteng ပြည်နယ်တရားရုံးအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဆွာဇီလန်အခြေပြု Pigg Peak ပိတ်ပင်ထားသည့်အခါအွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်းများ, ဘင်ဂိုကစားများနှင့်လိုင်စင်မဲ့ထီ, 2010 အတွက်တွေ့ခဲ့ရပါပြီခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါထုံးတမ်းစဉ်လာကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်, ပြီးတော့ကတည်းကအားလုံးပြည်တွင်းအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံလုံးဝပိတ်ပင်ထားခဲ့ကြသည်။
ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဒါခေါ် "မီးခိုးရောင်စျေးကွက်" တွင်ပါဝင်သည်။ ဒါဟာအစိုးရကအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရားဝင်သို့မဟုတ်မစဉ်းစားရန်ဆက်လက်ရှိမရှိထင်ရှားစေခြင်းငှါနေဆဲဖြစ်သည်။
ဤအစိုးရအတွက်ယေဘုယျသဘောထားရှိပါတယ်။ တကယ်တော့, ဝက်ဘ်ဆိုက်များသူတို့ထံမှပိုပိုပြီးသင်တန်းသားများကိုယူဆိုတဲ့အချက်ကိုမကြိုက်ကြဘူးသူကိုမြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစ်မျှမျှတတခိုင်မာတဲ့လော်ဘီလည်းမရှိ။ ဥပဒေကြမ်း၏ပြိုင်ဘက်ဥပမာ, ဥရောပမှာရှိတဲ့အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့, ရှုလေ့လာကြသည်: ဝက်ဘ်ဆိုက်များကာစီနိုလောင်းကစားရုံအော့ဖ်လိုင်းဧည့်သည်၏နီးပါး 20% ကရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
"စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များစည်းမျဉ်းအများပြည်သူကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 2008 အမျိုးသားလောင်းကစားပြင်ဆင်ရေးအက်ဥပဒေယခုအချိန်အထိလက်ခံထားသောနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ထိုကြောင့်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရှုပ်ထွေးမှုများထံမှကြုံတွေ့နေကြရသည်။ "
အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခဲ၏ဥပဒေနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအငြင်းအခုံထောက်ခံသူတွေ: အစိုးရ Web-လောင်းကစားရုံတရားဝင်မဟုတ်, သန်းပေါင်းများစွာ Rand ရှုံးသည်။ တောင်အာဖရိက၏လောင်းကစားရုံများအသင်း (SA ၏ကာစီနိုအစည်းအရုံး) ဤသို့သောကိန်းဂဏန်းများကိုးကား:
"ဒီနိုင်ငံဟာတရားမဝင်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာ Zar 110 သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ 7.8 သန်း) အကြောင်းကိုရှုံးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ၏ရန်လိုသည့်မူဝါဒမြေယာအဖွဲ့အစည်းများပိုက်ဆံဆုံးရှုံးစေသည်။ အမြတ်အစွန်းအတွက်အမြတ် 0.6% အထိနှေးကွေး။ "
ယခုအချိန်တွင်, အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။ "
ငါးနှစ်များအတွက်လောင်းကစားရုံ, ဘင်ဂိုကစား, လောင်းကစားနှင့် LPM ကဏ္ဍတွင်ကစားသမားအရေအတွက်အနည်းငယ်ကျဆင်းခြင်းရှိ၏။ ဒါပေမယ့်ပြည်နယ်ထီဖို့လက်မှတ်တွေများ၏ဝယ်ယူတိုးတက်လာခဲ့သည်။
10.6% - ကလောင်းကစားရုံများတွင်;
7.1% - ပုဂ္ဂလိကထီ;
6.2% - မြင်းပြိုင်ပွဲနှင့်အားကစားလောင်းကစား;
0,4% - ဘင်ဂိုကစား;
တရားမဝင်လောင်းကစားဂိမ်းများကိုလိုင်စင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအတွက်အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။ ဒါဟာအတိတ်နှစ်အနည်းငယ်တရားမဝင်လောင်းကစားအတွက်သင်တန်းသားများကို၏နံပါတ်လျော့နည်းသွားသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုရပါမည်။ နိုဝင်ဘာလ 2012 မှာတော့ကစားသမား 41% တရားမဝင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ 2015-2016 အတွက် - သာ 17.5% ။
လောင်းကစားကစားသမားစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကသာ 9.9% အသိအမှတ်ပြုသည်။ ပိုများသောလူမည်း 19.8-2015 အတွက် -2016% ကစားရန်စတင်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူ၏အသက်အရွယ် 25 နှစ်ပေါင်းထံမှကစားသမားအရေအတွက်, တိုးပွားလာနေသည်။